Filtrer les éléments par date : jeudi, 16 juillet 2020
jeudi, 16 juillet 2020 19:11
Rolly Mercia: Tazomina am-ponja vonjimaika ao Antanimora
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao Antanimora io hariva io Rahajason Harry Laurent na Rolly Mercia, minisitry ny serasera teo aloha ary mpikambana amin’ny antoko HVM.
Voarohirohy amin’ny hetsika nataona andian’olona nandoro kodiarana sy nilanja sorabaventy mitaky ny amoahana am-ponja an’i Berija Ravelomanantsoa, izay nitranga teo Ambohipo ny marainan’ny alatsinainy 13 jolay 2020 lasa teo, ity minisitry ny serasera teo aloha ity.
Lehilahy efatra no voasambotry ny Polisy nandritra io hetsika tamin’ny Alatsinainy io. Nentina tao amin’ny Commissariat Central Tsaralalana izy ireo, natao famotorana. Nandritra ny famotorana no voalaza fa nanonona an’i Rolly Mercia ho anatin’iny hetsika iny ny iray tamin’izy efa-dahy ireo.
jeudi, 16 juillet 2020 18:52
Ambatonjara Alasora: Zaza menavava efa maty hita anaty harona
Miaramila nanao fisafoana tanàna no nahita harona mampiahiahy mipetraka ambony talatalata fivarotana, androany maraina teny Ambatonjara Alasora.
Zaza menavava mbola misy tadim-poitra, vavy kely saingy efa tsy nisy aina intsony no tao anatiny rehefa nozahana. Ny Fonkotany taorian'izay no nandray an-tanana sy nandevina ilay faty.
jeudi, 16 juillet 2020 16:14
Fahamaizan’ny ONE: Nametraka fitoriana olon-tsy fantatra ny ministeran’ny tontolo iainana
Nitafa tamin’ny mpanao gazety teo Antaninarenina, nanoloana ny sisan’ny afo taorian’ny fahamaizan’ny foiben’ny Office Nationale pour l’Environnement na ONE, ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala ny tolakandro teo namintina ny zava-nitranga sy ny asa ataon’ny ministera iadidiany taorian’iny loza iny.
Raha nanodidina ny tamin’ny 8ora sy sasany ny alin’ny alarobia 15 jolay no tsikaritry ny manodidina ny fisiana setroka sy lelafo tany amin’ny rihana ambony ny birao, dia tamin’ny 9ora latsaka dimy, ny minisitra no nahazo fampandrenesana avy amin’ny Tale jeneralin’ny ONE sy ny minisitry ny filaminam-bahoaka fa mirehitra ny ONE. Niakatra teny an-toerana avy hatrany izy taorian’izay.
Niezaka nanavotra izay azo navotana ny mpiara-miasa hoy ny minisitra, ary anisany tafavoaka tsy may tao ny « serveur » mirakitra ny dosie vita nomerika.
Rava maina ny tsena lavanila tao Manakana Kaominina Ambodiampana, Distrika Sambava, nanokafana ofisialy ny taom-piotazana lavanila ny 15 jolay 2020 ho an’ny Faritra SAVA.
Tsy mifanaraka amin’ny vidin’ny lavanila ny tantsaha sy ny mpividy. 300 000 Ariary ny kilao hoy ny filohan’ny fikamban’ny tantsaha, tsy nanome ny heviny ireo mpanangom-bokatra dia rava maina tamin'io andro voalohany io.
jeudi, 16 juillet 2020 15:26
Tonizina: Nametra-pialana ny praiminisitra Elyes Fakhfakh
Ady tombontsoa no voalaza fa ao ambadiky ny naneren’ny filoha Kaïs Saïed an’i Elyes Fakhfakh hametra-pialana tsy ho praiminisitra. Ny alarobia 15 jolay ity farany no nanolotra ny taratasy fametraham-pialany tamin’ny filoha toniziana, rehefa nitarika governemanta nandritra ny dimy volana.
jeudi, 16 juillet 2020 14:15
Donald Trump: Nosoloiny ny talen’ny fampielezan-keviny
Nanova ny talen’ny fampielezankeviny i Donald Trump, efa-bolana tsy hahatongavan’ny fifidianana filoham-pirenena amerikana. Bill Stepien, izay lefitry ny talen’ny fampielezan-kevitra nahazoan’i Donald Trump ny fandresena ho tamin’izao taom-piasana voalohany izao no notendreny ho tompon-toerana. Tazominy ho mpanolontsaina akaiky azy hiatrehany ny fifidianana amin’ny novambra kosa i Brad Parscale, talen’ny fampielezan-keviny teo aloha.
jeudi, 16 juillet 2020 14:07
Nosy-Be: Mikatona ny seranan-tsambo
Voarara ny fivezivezena an-dranomasina mampitohy an’i Nosy-Be amin’ny Distrika Ambanja. Mikatona nanomboka omaly ny seranan-tsambo Nosy Be. Ny vokatra, ny marary no afaka taterina. Anisany fepetra noraisin’ny komity miady amin’ny Covid-19 Nosy Be io hisorohana ny fihanak’ity valanaretina ity. Mihatra koa ny « couvre-feu » aty an-toerana.
jeudi, 16 juillet 2020 14:06
Paierie Générale Antaninarenina: Mizotra tsara ny fizarana « pension »
Nanomboka androany ny fizarana « pension » ao amin’ny Paierie Générale Antaninarenina. Tsy misy ahiana ihany koa ny fizarana karama ho an’ny mpiasam-panjakana.
Be no nametra-panontaniana sao nahakasika ny Paierie Générale Antaninarenina ny haintrano nahazo ny Office National pour l’Environnement nitranga halina. Nanambara ny teo anivon’ny Tahirimbolam-panjakana Malagasy na Trésor fa tsy nisy voakasika ny Paierie Générale Antaninarenina, ary vao niandoha ny afo dia nafindra ny « serveur » sy ny dosie tao.
jeudi, 16 juillet 2020 09:54
Rolly Mercia: Nosamborin’ny Polisy, savaina tranony
Nosamborin’ny Polisy androany maraina i Rahajason Harry Laurent na Rolly Mercia, minisitry ny serasera sy kolontsaina tamin’ny tetezamita sy tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina.
Nentina tao amin’ny Commissariat Central Tsaralalana izy taorian’ny fisamborana azy ny maraina. Roso amin’ny fisavana ny tranony eny Ambolokandrina Boriborintany faharoa Antananarivo ny mpanao fanadihadiana nanomboka io misandratr’andro io.
jeudi, 16 juillet 2020 09:50
Gal Mamizara Jules: Nodimandry androany maraina
Nindaosin’ny fahafatesana tampoka ny marain’ity 16 jolay 2020 tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana nitsaboana azy ny jeneraly Zandary misotro ronono Mamizara Jules.